မြိတ်မြို့တွင်သစ္စာရေစင်ဖြင့်ကုသပေးနေသည့်ဆရာ လေးတစ်ပါးထံနေ့စဉ်လာရောက်ကုသသူလူနာ ထောင်ချီရှိ - Tameelay
မြိတ်မြို့တွင်သစ္စာရေစင်ဖြင့်ကုသပေးနေသည့်ဆရာလေးတစ်ပါးထံနေ့စဉ်လာရောက်ကုသခံသည့်လူနာ ထောင်ချီရှိနေတယ်လို့အကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီ ထံမှသိရပါတယ်။
မြိတ်မြိှု့ကို မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှစတင်ကာရောက်ရှိလာပြီးမေလ ၂၇ ရက်နေ့အထိအခမဲ့ကုသပေးမည်
ဟုဆိုကာကြေငြာကုသပေးနေသည့်မကွေးတိုင်း၊ နတ်မောက်မြို့နယ်မှ ဆရာလေး ဒေါ်သုနန္ဒာထံသို့
ဒေသခံများတစ်နေ့လျှင် ၃၀၀၀ ကျော်လာရောက်ကု သမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
” ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို လူနာ ၃ ထောင်ကျော် ကုသပေးရပါတယ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ ၂၇ ရက်နေ့အထိကုသပေးမှာပါရေတစ်ဗူးကို
၁၀၀၀ နှင့် ရောင်းတာဆိုတာကလည်းဆရာလေးက ပြန်လည်လှူဒါန်းပေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကုသမှုခံယူတဲ့သူတွေကတစ်ကယ်တန်း မှာသူတို့ယူသွားတာပါ သူတို့အလှူတွေပါသွားလို့ပါ။
ဆရာလေးက အဓိဌာန်ဝင်ရင်းသစ္စာပြုခဲ့တယ်အဲဒီကနေ သစ္စာ ရေစင်နှင့်ဆေးကုသပေးဖြစ်တာပါ”” လို့ အကျိုး တော်ဆောင်ဦးစိုးဝင်းမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သံဃာနာယကဆရာတော်နှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတို့၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်ကုသပေးနေကြောင်း ဦးစိုးဝင်းမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြိတ်မြို့တွင်ကုသပေး ပြီးပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာတွင် ဆက်လက်ကုသပေးမည်ဟုသိရပါတယ်။
မွိတျမွို့တှငျသစ်စာရစေငျဖွငျ့ကုသပေးနသေညျ့ဆရာ လေးတဈပါးထံနစေ့ဉျလာရောကျကုသသူလူနာ ထောငျခြီရှိ
မွိတျမွို့တှငျသစ်စာရစေငျဖွငျ့ကုသပေးနသေညျ့ဆရာလေးတဈပါးထံနစေ့ဉျလာရောကျကုသခံသညျ့လူနာ ထောငျခြီရှိနတေယျလို့အကြိုးတျောဆောငျကျောမတီ ထံမှသိရပါတယျ။
မွိတျမွိှု့ကို မလေ ၁၇ ရကျနမှေ့စတငျကာရောကျရှိလာပွီးမလေ ၂၇ ရကျနအေ့ထိအခမဲ့ကုသပေးမညျ
ဟုဆိုကာကွငွောကုသပေးနသေညျ့မကှေးတိုငျး၊ နတျမောကျမွို့နယျမှ ဆရာလေး ဒျေါသုနန်ဒာထံသို့
ဒသေခံမြားတဈနလြေှ့ငျ ၃၀၀၀ ကြျောလာရောကျကု သမှုခံယူနတေယျလို့သိရပါတယျ။
” ကြှနျတျောတို့တဈနကေို့ လူနာ ၃ ထောငျကြျော ကုသပေးရပါတယျ မလေ ၁၇ ရကျနကေ့နေ ၂၇ ရကျနအေ့ထိကုသပေးမှာပါရတေဈဗူးကို
၁၀၀၀ နှငျ့ ရောငျးတာဆိုတာကလညျးဆရာလေးက ပွနျလညျလှူဒါနျးပေးတဲ့နရောတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
ကုသမှုခံယူတဲ့သူတှကေတဈကယျတနျး မှာသူတို့ယူသှားတာပါ သူတို့အလှူတှပေါသှားလို့ပါ။
ဆရာလေးက အဓိဌာနျဝငျရငျးသစ်စာပွုခဲ့တယျအဲဒီကနေ သစ်စာ ရစေငျနှငျ့ဆေးကုသပေးဖွဈတာပါ”” လို့ အကြိုး တျောဆောငျဦးစိုးဝငျးမှပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သံဃာနာယကဆရာတျောနှငျ့မွို့နယျအုပျခြုပျရေး မှူးတို့၏ထောကျခံခကျြဖွငျ့ကုသပေးနကွေောငျး ဦးစိုးဝငျးမှပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မွိတျမွို့တှငျကုသပေး ပွီးပါက ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊လှိုငျသာယာတှငျ ဆကျလကျကုသပေးမညျဟုသိရပါတယျ။
တန်းတူဟူ၍ကား မတောင်းဆိုပါ…! ဆရာလေး ရင်ဖွင့်ထားတာဖတ်မိပြီး စိတ်ထဲတောင်မကောင်းလိုက်တာ ဆရာလေးရယ်။
တန်းတူဟူ၍ကား မတောင်းဆိုပါ…! ဆရာလေး ရင်ဖွင့်ထားတာဖတ်မိပြီး စိတ်ထဲတောင်မကောင်းလိုက်တာ ဆရာလေးရယ်။ တက္ကသိုလ်မှာနေ့ဆွမ်းကပ်တော့ ဆွမ်းအလှူရှင်ကကျောင်းသားသံဃာတွေအကုန်လုံးကို ဝတ္ထုငွေတစ်ပါးသုံးသောင်းလှူ တယ်။ ဘေးတခြားဆွမ်းဝိုင်းမှာသီလရှင်ကျောင်းသူတစ်ပါးတည်း ထီးထီးကြီးဆွမ်းဘုဉ်းနေတဲ့ ကိုယ်တော့အဲ့ဒိသုံးသောင်းမရလိုက်ဘူး။ သူရည်ရွယ်ပြီးစိတ်ထဲထင်ထားတာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာ သံဃာရဟန်းတော်တွေပဲရှိတယ်လို့ထင်တာနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုကျောင်းသူ သီလရှင်လို့လည်းထင်ပုံမရသလို ကိုယ့်ပုံစံကလည်းလမ်းကြုံလို့တက္ကသိုလ်ဆွမ်းစားကျောင်းကို လမ်းဘေးအဝစားမဏ္ဍပ်ထင်ပြီး ထမင်းလာစားနေတဲ့ သီလရှင်ပုံစံများပေါက်နေသလား မသိ။ တကယ်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် …
သင့်ကိုထားခဲ့တဲ့တယောက်ထက် သင့်ကိုအဆပေါင်းများစွာပိုချစ်နိုင်တဲ့ တယောက်ရှိလာမှာဖြစ်လို့ကံတရားက သင့်ကို လမ်းခွဲစေခဲ့တာပါ
အသက် ၁၆ နှစ်မှာ တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားက အကြောင်းပြချက်မရှိ လမ်းခွဲခဲ့တယ် အသက် ၂၁ မှာ တွဲခဲ့တဲ့ရည်းစားက အိမ်သသဘောတူတဲ့လူနဲ့ ယူရမယ် ဆိုပြီး လမ်းခွဲခဲ့တယ် အသက် ၂၂ မှာ တွဲခဲ့တဲ့ရည်းစားက ဖုန်းတည မဆက်မိတာလေးကို စိတ်ကောက်ပြီး လမ်းခွဲခဲ့တယ် တွဲခဲ့သမျှ ရည်းစားတွေ …
ကမ္ဘာ့အသန့်ရှင်းဆုံး မြို့ ၁၀ မြိုိ့အကြောင်း
ဟမ်းဘတ် ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ် မြို့ ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာအသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားထိန်းသိမ်းတဲ့ မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြိုိ့အနေနဲ့လည်း ၂၀၅၀ခုနှစ်မှာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို ၈၀%အထိလျော့ချမယ်လို့ လည်းရည်မှန်းချက်ထားရှိပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားများကလည်း မြို့သန့်ရှင်းရေးအတွက် အထူးစည်းကမ်းရှိကြပြီး သန့်ရှင်းရေးနည်းပညာများကိုလည်း စနစ်တကျသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဒီမြို့ဟာ အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ချီကာဂို အများသိကြတဲ့အတိုင်း အမေရိကန် ချီကာဂိုမြို့ဟာ လူဦးရေ …